अभिनेत्री श्वेता बसुकाे बैबाहिक सम्बन्ध आखिर किन टिक्न सकेन एक बर्ष पनि? हेर्नुहाेस् – PathivaraOnline
Home > मनोरञ्जन > अभिनेत्री श्वेता बसुकाे बैबाहिक सम्बन्ध आखिर किन टिक्न सकेन एक बर्ष पनि? हेर्नुहाेस्
admin February 22, 2020 मनोरञ्जन	0
एजेँसी- बलिउड अभिनेत्री श्वेता बसु प्रसादको एक खबर बाहिर आएको छ । उनि विवाह गरेको वर्ष नपुग्दै डिभोर्स गर्ने भएकी छिन् । बेला बेलामा निकै चर्चा र विवादमा आउने उनि पछिल्लो समय सेक्स र्याकेटमा उनको नाम आएपछि विवादमा परेकी हुन् गएको वर्षमात्रै विवाह गरेकी बसुले फिल्म मेकर रोहित मित्तलसँग विवाह गरेकी थिइन् । एक आपुमा दरार आएपछि डिभोर्स दिने भएकी हुन् उनले र रोहित मित्तलसँग विवाह गरका थिए ।
बसुले मित्तलसँग विवाह गरेपनि संम्बन्ध टिक्न नसकेका कारण अलग हुन लागेको खबर ट्वीट गखै जानकारी दिएकी हुन् ।
नायिका उर्वशी फेरी विबादमा तानिइन्, कारण यस्तो अनौठो
एजेन्सी । भारतीय सुन्दरी नायिका उर्वशी रौतेलाको सुन्दरताको मिडियाले खुलेर तारिफ गर्ने गरेका छन् । जसका कारण पनि उनको चर्चा चाहिने भन्दा बढेको होला । चर्चामा नै रहेका बेला यि सुन्दरी विबादमा पनि आइरहेकी छिन् । यसैबिच हालै सम्पन्न फिल्मफेयर अवार्ड २०२० मा आफ्नो पहिरनका कारण अभिनेत्री उर्वशी अप्ठ्यारोमा परिन् ।
रातो पहिरनमा ढल्किँदै कार्यक्रम स्थलमा पुगेकी उनी यो गाउन लगाएर बस्दा आफू ४ वटा सीटमा बसेकी थिइन् । जसका कारण १ सिटमा बस्न पैसा दिएर गएको ठाउँमा उनी ४ सिटमा बसेको भन्दै उनी ट्रोलको शिकार बन्न पुगेकी हुन् । उर्वशीले इन्स्टाग्राममा फोटो र भिडियो शेयर गरेकी छिन् जसमा उनी निकै ठूलो र भारी गाउन लगाएकी देखिएकी छिन् भने भिडियोमा आँफैले ४ पटक कुर्ची फेरेको समेत बताएकी छिन् ।
माग्ने बुढाले बिच सडकमा बर्षा राउतको सल ता’ने पछि भयो यस्तो बवाल (भिडियो हेर्नुस्)